Kungenzeka ukunika amandla Amakhamera wethu wangaphandle ngeSolar Panel? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Kungenzeka ukunika amandla Amakhamera wethu wangaphandle ngeIphaneli Yelanga?
Esikhathini semininingwane, abantu banaka kakhulu ubumfihlo nokuphepha, kufaka phakathi i-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, ngakho-ke amadivayisi wokuqapha ahlakaniphile angena kancane kancane ekhaya.
Uzothola nokuthi amanye amakhamera wokuqapha ahlakaniphile awakwazi ukusetshenziselwa kuphela ezindlini, kepha futhi aqale ukufaka imisebenzi yobufakazi obuthathu, engafakwa kuvulandi noma ngaphandle kwesango.
Kodwa okulusizi ukuthi basebenzisa amabhethri e-lithium noma ama-AA. Lapho amandla esephelile, kusadingeka ukuthi baxhume kumandla we-AC noma bashintshe ibhethri. Uma ungekho ekhaya ngalesi sikhathi, khona-ke kunengozi yokuphepha.
Cabanga ngakho ngokucophelela, uyini "umdlalo ofanele" wamakhamera okuphepha angaphandle? Ngokusobala amaseli elanga, ngemuva kwakho konke, amandla elanga amahhala, akunjalo?
Amapaneli elanga ngokuvamile efakwe ngaphezulu kwemishini futhi angahlala amunca amandla elanga ukuze azisebenzisele wona.
Uma kungekho ukukhanya kwelanga okwanele endaweni yokufaka, iphaneli lelanga lingabekwa endaweni enelanga elithe xaxa ngekhebula lesandiso. Iphaneli yelanga ifakwe isibiyeli esinama-multi-angle ukuze sikwazi ukulandela ukulandelwa kwezinguquko ezithile zonyaka ku-angle yelanga ephakeme futhi silungise i-engeli ngokufanele, eguquguqukayo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, iphaneli yebhethri nayo ayinamanzi, ngakho-ke awuyesabi imvula noma iqhwa.
Sicela uxhumaneUkuhlanganiswa kwe-CTC ngobaikhwalithi ephezuluSolarPanels ngoba Home Wire-free Cameras.